Lorenzo Insigne oo diiradda u saaran Barcelona iyo koox kala dhisan Spain oo kula dagaallameysa saxiixiisa – Gool FM
(Italy) 22 Juun 2021. Kaddib markii ay dhowaan si bilaash ah kula soo saxiixatay Sergio Aguero iyo Memphis Depay, Barcelona ayaa haatan il gaar ah ku heysa saxiixa xiddiga kooxda Napoli ee Lorenzo Insigne.
Heshiiska uu laacibka Taliyaaniga ah kula jiro Napoli ayaa dhici doono xagaaga dambe iyadoo ay xusid mudan tahay inuusan wali qalinka dul dhigin heshiis cusub oo uu kooxdan baaqi ugu sii ahaan doono.
Wargeyska kasoo baxa dalka Taliyaaniga ah Sportitalia ayaa sheegay inay Barca xiiseyneyso iney la soo saxiixato xidiga kooxda Napoli Insigne,madaama Napoli ay diyaar u tahay inay ka fogaato inuu si bilaash ah ku waayo xagaaga soo aadan hadii uusan qandaraaska u kordhin kooxda.
Insigne ayaa soo jeetay indhaha kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub, waxaana uu sugaya inta uu ka dhamaanayo tartanka qarammada qaaradda Yurub, si uu u dhageesto dalabaadka u imaanaya, waxaana la fahansan yahay inuu kordhi doono mushaharaadka uu dalbanayo.
Dhinaca kale kooxda ka dhisan dalka Spain ee Atletico Madrid ayaa sidoo kale xiiso waali ah u qabta laacibkan weerarka ka dheela sida ay sheegtay Mundo Deportivo.
30-jirkan ayaa 109-gool u dhaliyay kooxdiisa Napoli isagoo u saftay 397 kulan oo rasmi ah, waxaana ku jira gool uu ka dhaliyay garoonka Camp Nou, ciyaar qeyb ka aheyd tartanka Champion League, taa oo dhacday bishii August ee sanadkii hore, markaas oo Barca ay ku adkaatay 3-1.